Archive du 18-mars-2022
Tao anatin’ny 60 taona Ity no fitondrana nahay nampiesona indrindra
Ity no Fanjakana tia mampiesona sy mpivarotra nofinofy indrindra tao anatin’ny 60 taona. Hafa no tenenina androany, ary hafa no lazaina rahampitso. Isan’ireny ny politika hitantanana ny firenena izay nambara tany am-piandohana fa tsy mila fanampiana sy fitrosana vola amin’ny mpamatsy vola mahazatra,
Afaka mitsara tena koa anie e !
Tsy ny fampidirana olona madio no mampadio fitondrana, hoy ny mpanao politika iray izay omaly. Tsy ny fampidirana piesy vaovao koa no mahatonga fiara iray ho vaovao,
Haingo Paradis “Toy ny vesarana adin-tsaina be izany ny Filoha”
Isan’ireo tonga dia kivy aho, hoy ny mpisehatra ara-tsosialy sady mpandinika fiarahamonina, Haingo Paradis, vao nahita ny mpikamban’ny governemanta voatendry farany teo.
Lozam-pifamoivoizana teny Itaosy Nipotsaka ny atidohan’ilay zaza
Fiara rexton iray no nahafaty zazalahy kely tombanana eo amin’ny 5 taona eo ho eo omaly atoandro teny Itaosy, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Mpikirakira ny taratasim-panadinana “Avoahy ny volanay, tsy misy miala eo”
Mitaky tsy misy hatak’andro ny fandoavana ny karamany « vacation » 2021 ireo mpiasa « vacataire non-fonctionnaire » nikarakara ny valopim-panadinana sy ny taratasim-panadinana CEPE sy BEPC.
Lalam-baovao Tsarasaotra Zazalahy kely roa nofaohan’ny fiara, maty ny iray
Ankizy kely miisa omaly no fantatra fa lasibatry ny lozam-pifamoivoizana teto amintsika. Ankoatra ilay iray 5 taona namoy izay ainy teny Itaosy dia zazalahy kely miisa 2
Vidina PPN midangana Mahazo vava be amin’ny mpanjifa ny mpivarotra
Ela ny ela fa mitaraina ny amin’ny vavan’ny mpanjifa mahazo azy ireo mpivarotra enta-madinika eto an-drenivohitra sy ny manodidina.
Sosialy Mbola vitsy ny Malagasy manana fiantohana ara-pahasalamana
Mbola vitsy amin’ny Malagasy no manana fiantohana ara-pahasalamana sy amin’ny fiainana ankapobeny mihitsy eto amintsika.
Mpisehatra ara-pizahantany Tofoka amin’ny ataon’ny minisitra sy ny fanjakana
Diso fanantenana ny mpisehatra amin’ny tontolon’ny fizahantany, nanantena minisitra vaovao, kanefa ny teo ihany no teo eo anatrehan’ny famerenana an’Atoa Joël Randriamandranto eo amin’izany toerana izany.
Front de libération nationale “Tsy piesy vitsy vaovao no manome fiara vaovao”
Vaovao araka ny filazany azy nefa ny teo ihany no teo fa nampiana kely raha ny governemanta vao natsangana io no lazaina, hoy ny antoko politika FLN na “Front de libération nationale”.
Grevy etsy, fitakiana eroa Mbola tany misy Fanjakana ihany ve eto ?
Fitakiana, grevy, savorovoro, menomenona ! Ireo hatrany no isan’ny manamarika ny fiainana andavanandro eto Madagasikara amin’izao fotoana izao.
Carrozza Heliarisoa “Sokafy amin’ny rehetra ny habakabaka”
Mangataka ny famelarana ny sidina anabakabaka tahaka ny Ethiopian Airlines, Kenya Airways,… hisidina eto Madagasikara ny Fikambanana Zanak’i Gasikara na AZIG tarihin-dRtoa Carrozza Heliarisoa.
Fomba fiady vaovaon’ny jiolahy Halatra finday lasa fitakiam-bola, fandrahonana…
Miha avo lenta ny resaka halatra mivadika ho fitakiam-bola eto Antananarivo. Tovolahikely antsoina hoe Lohan, 18 taona, mpianatra taona famaranana manao « cours » ao amin’ny ACEEM Analamahitsy no lasibatry ny olon-dratsy ny sabotsy 12 martsa teo.
Haintrano tao Andakabe, Morondava Fianakaviana telo trano no tsy manan-kialofana
Nitrangana haintrano omaly tolakandro tao Andakabe, Morondava, faritra Menabe. Fianakaviana telo trano, ahitana olona miisa 20, no tsy manan-kialofana vokatr’izany, raha ny fampitam-baovao voaray.
Koweit Vehivavy Malagasy 52 nampidirina am-ponja
Tafakatra 52 isa ireo vehivavy sy renim-pianakaviana Malagasy miasa any Koweit no nampidirina am-ponja vonjimaika any an-toerana.
Raharaha miaraka.com Hiakatra fitsarana anio ny andiany voalohany
Hanomboka amin’ity herinandro ity, dia anio zoma 18 martsa, no hiakatra fitsarana ny raharaha miaraka.com, hoy ny mpitondra tenin’ireo lasibatr’ity vovonana mpanohana tetikasa ity, Harivola Raharinosy.